समाज Archives - Page 174 of 255 - Dna Nepal
शोकमा श्रेया परिवार, अपराधीलाई फाँसीको सजाएँ माग्ने पहारीको बचन २२ आश्विन २०७५, सोमबार १४:५२
पोखरा, असोज २२ । बलात्कारपछि १० बर्षिया बालिकाको हत्या भएपछि श्रेया सुनारको परिवार यतिबेला शोकमा छ । पोखरा पुम्दीभुम्दीकी श्रेया सुनारको गत असोज ८ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । छिमेकी कुशुम पौडेलले उनको हत्या गरेका हुन् । श्रेयाको..
विन्ध्यवासिनी मन्दिरका पुजारीलाई तलव, अवदेखि भेटि चलाउन नपाउने
पोखरा, असोज २२ । पोखराको विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा करारमा पुजारी नियुक्त गरिएको छ । दर्शनार्थीले चढाएको भेटी र दान एकलौटी गरेपछि पुजारीलाई तलव दिएर राखिएको हो । केही समययता पुजारी र धार्मिक क्षेत्र विकास समिति बीच ठूलो विवाद थियो । यसअघि..
रुखबाट खसेर एकजनाको मृत्यु
पोखरा, असोज २२ । म्याग्दीको वेनीमा रुखबाट खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । वेनी नगरपालिका वडा नम्बर २ खवराका ३४ बर्षिय टेकबहादुर जिसीको घर नजिकै बारीमा घाँस काट्ने क्रममा खनियोको रुखबाट खसेर मुत्यु भएको हो । रुखबाट खस्दा गम्भी घाईते भएका उनको..
निर्मला हत्याकाण्ड–प्रहरीले किन साट्यो ल्याबमा पठाएको नमुना ?
कञ्चनपुर, असोज २२ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको नमुना नै हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ । घटनामा कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसपी डिल्लराज विष्टसहितको..
पानी सर्केर कैदीको मृत्यु
रामेछाप, असोज २२ । जिल्ला कारागार कार्यालय रामेछापमा कैद भुक्तान गरिरहेका एक कैदीको ज्यान गएको छ । लागुऔषध मुद्दामा छ वर्षको कैदी जीवन बिताइरहेका रुपन्देही जिल्ला साविकको वनकट्टी गाविस–९ का ३९ वर्षीय सुशील श्रेष्ठको ज्यान गएको हो । पानी..
श्रेष्ठ मृत भेटिए ! २१ आश्विन २०७५, आईतवार १०:४३
पोखरा, असोज २१ । स्याङजाको पुतलीबजार ११ जाडखोलाका यमप्रसाद श्रेष्ठ मृत भेटिएका छन् । ४० वर्षीय श्रेष्ठ आफ्नै घरभन्दा १ सय मिटर तल मृत भेटिएका हुन् । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हत्या वा आत्महत्या एकिन नभएको प्रहरीले जनाएको छ..
बलात्कारबाट जोगिन धनगढीमा १५ सय महिला मार्सल आर्ट सिक्दै
कञ्चनपुर, असोज २१ । बलात्कारका घटना दिनहुँ बढ्न थालेपछि धनगढीमा महिलाहरुलाई आत्मरक्षा तालिम दिईएको छ । राष्ट्रिय गोजुरियो कराँते–दो संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा शनिबार किशोरी र महिलाका लागि ‘उमेन्स सेल्फ डिफेन्स क्याम्प..
गोरुले दुध दिन थालेपछि दर्शकको भीड, ब्यवस्थापनमा जुट्यो गाउँपालिका
सिन्धुपाल्चोक, असोज २१ । पहिले कहींकतै नदेखेको–नसुनेको दूध दिने गोरु हेर्न आउनेको लर्को अझै घटेको छैन । हेलम्बु गाउँपालिका इचोक पुरानागाउँस्थित दुधालु गोरु हेर्न आउनेहरुका लागि सेवा दिन र गोरुको संरक्षणका लागि गाउँपालिका आफैं जुटेको समाचार..
पोखरामा ट्यांकर र मोटरसाईकल ठोकिँदा १ जना घाईते २० आश्विन २०७५, शनिबार ११:२१
पोखरा, असोज २० । पोखरा ३१ नहरचोकमा पानी बोक्ने ट्यांकर र मोटरसाईकल ठोकिँदा एकजना घाईते भएका छन् । खुदीबाट बेगनासतर्फ जाँदै गरेको ग १५ प ६२४६ नम्बरको मोटरसाईकल ग १ ख ३५१६ नम्बरको पानी बोक्ने गाडीसँग ठक्कर खाई दुर्घटना हुँदा मोटरसाईकल चालक घाईते..
बलात्कारपछि हत्या गर्ने युवकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद